संसदमा अझै मोदी भ्रमणको ह्याङ : मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध : एमाले, चार जना मन्त्री किन स्वागत गर्न जनकपुर गएको : फोरम :: PahiloPost
संसदमा अझै मोदी भ्रमणको ह्याङ : मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध : एमाले, चार जना मन्त्री किन स्वागत गर्न जनकपुर गएको : फोरम
16th May 2018, 03:04 pm | २ जेठ २०७५
काठमाडौं: भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको दुई दिने भ्रमण सकाएर फर्किएको चार दिन भइसक्दा पनि संसदको बैठकमा त्यही भ्रमणको ‘ह्याङ’ अझै उत्रिएको छैन।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमालेका सांसदले मोदी भ्रमणका क्रममा देशको झण्डा बिगारिएको भन्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने माग गरेका छन्।
एमालेकी सांसद नीरुदेवी पालले प्रदेश २ मा राष्ट्रिय झण्डा बिगारिएकोमा कर्मचारीलाई मात्र स्पष्टीकरण सोधिएकोमा मुख्यमन्त्रीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिनु पर्ने माग गरिन्।
‘नेपालको झण्डा बिगार्ने, नेपालको झण्डाको रंगसम्म थाहा नहुने र आकारसम्म थाहा नहुने? माननीय मन्त्री ज्यूले कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको मैले थाहा पाएँ। तर आज त्यो कर्मचारीलाई मात्र होइन, मुख्यमन्त्रीज्यूलाई नै स्पष्टीकरण सोधिनु पर्छ भन्ने म जोडदार माग गर्न चाहन्छु,’ पालले भनिन्,‘हामी वामपन्थीहरु अध्ययनशील हुन्छौं। हामी अध्ययन गरौंला। तर यस्ता मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रशिक्षण दिने कि नदिने यो कुरामा म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
आजकै बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई विवादमा तानेर संघीयता नै समाप्त पार्न खोजिएको आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा कृषि विश्वविद्यालय जाने क्रममा प्रदेश सरकारले मात्र स्वागत गरेको सुनाउँदै श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आउँदा केन्द्रका चार–चार जना मन्त्रीहरु किन जनकपुरधाम गएको भनी प्रश्न गरे।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण टोलीमा उत्तराखण्डको नगर गएका थियौं। त्यहाँ जादा त्यहाँका चिफ मिनिष्टर, गर्भनर र मिनिस्टरहरुले स्वागत गरे। स्टेजमा पनि त्यहाँ कुनै मन्त्रीहरुको आगमन पनि थिएन, उपस्थिति पनि थिएन। स्टेट भिजिट जस्तो भएता पनि स्टेजमा समेत स्टेटका मिनिस्टरहरु बसेका थिए। तर हाम्रा गएका मन्त्रीहरु हामीसँगैको तल रोमा बस्नु भएको थियो। संघीयताको मर्म जसरी उत्तराखण्डमा देखियो। कमसेकम त्योबाट पनि हामीले सिख लिनु पर्छ,’ श्रीवास्तवले भने।
‘हाम्रो देशमा भारतीय प्रधानन्त्रीले स्टेट भिजिट गर्दा किन चार–चार जना मन्त्री गए?,’ श्रीवास्तवले प्रश्न गरे,‘मन्त्री पनि कस्ता गए कि त्यहाँ झण्डाका विषयमा आजसम्म तर्कवितर्क हुँदैछ। अहिलेसम्म सरकारले पनि त्यस विषयमा स्पष्टीकरण दिएन।‘
‘कसको कमिकमजोरीले झण्डाको त्यस्तो स्थिति आयो? अथवा कल्ले गर्दा खेरी भएको हो?कुनै पक्षबाट यो सदनलाई आश्वस्त पारिएन।’
मोदी भ्रमणका क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बोलाएर नेपाली सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने काम भएको आरोप श्रीवास्तवले लगाए।
संसदमा अझै मोदी भ्रमणको ह्याङ : मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध : एमाले, चार जना मन्त्री किन स्वागत गर्न जनकपुर गएको : फोरम को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।